Gymnastics ho an'ny mpandray anjara
Ny fomba fiaina ara-pahasalamana dia mihamitombo tsikelikely saingy azo antoka fa tonga amin'ny lamaody. Toa mbola manaiky ny vehivavy fa tsy misy fomba ahafahana mitazona tarehimarika mora kokoa noho ny fanaovana fanatanjahantena sy ny fihinanana sakafo mahasalama. Amin'io lafiny io, maro no liana amin'ny gymnastics ho an'ny mpandray anjara, satria ho tonga haingana ny fampiharana ireo atleta avo lenta.
Ahoana no hanombohana ny gymnastique?
Voalohany indrindra, manapaha hevitra raha te hanatrika antokom-pahaizana atleta ara-panatanjahan-tena sy atletisma ho an'ny mpandray anjara ianao na izay zavatra mahaliana azonao ampiharina amin'ny maraina ho toy ny "fiampangana".
Raha toa ka tsy mikasa ny mametraka rakitsoratra ianao ary te-hitazona fotsiny ny hozatrao, dia mifanaraka amin'izany ny iray amin'ireo fomba ireo. Mazava ho azy, ny gymnastics esthetika ho an'ny mpandray anjara ao amin'ny klioban'ny fanatanjahan-tena dia tena tsara indrindra, satria ao ilay mpampianatra mahay dia afaka mitari-dalana anao sy manampy anao hanao ny fampiharana araka ny tokony ho izy.
Raha manana olana ianao amin'ny fotoana malalaka, dia ajanony any an-trano ny lesona - afaka mikarakara tsy miankina izy ireo ary hitondra soa betsaka ho azy ireo amin'ny fampidirana kilasy fianarana ho an'ny mpandray anjara amin'ny klioban'ny fanatanjahan-tena.
Raha manan-janaka ianao, dia miezaha mahita fitondran-tena malaza ho an'ny ankizy, satria raha mampiavaka ny zanakao hatramin'ny fanatanjahan-tena hatramin'ny fahazazany dia tsy ho sadaikatra kokoa, hifehezana ary ho matoky tena izy fa hitazona ny fahazarana tsara izay mety hanampy azy amin'ny fiainana.
Na izany na tsy izany, ho an'ny gymnastics dia mila:
fotoana malalaka farafahakeliny 2-3 farafahakeliny, fara fahakeliny 30 minitra;
Matoanteny amin'ny endrika;
fanatanjahan-tena sy akanjo, tsy mandahatra ny hetsika.
Aza adino fa ny kilasy dia tsy hitondra soa ho an'ny vatanao imbetsaka isam-bolana. Ho an'ny gymnastics ho tombon-tsoa, ​​ny zavatra manan-danja indrindra dia ny miezaka tsy tapaka izany. Amin'izany fomba izany dia ho afaka hampatanjaka ny hozatrao ianao ary amin'ny tenanao mba hianatra ny tombontsoa rehetra amin'ny fanatanjahantena tsy tapaka.
Gymnastics ho an'ny mpandray anjara amin'ny fahavoazana
Vehivavy maro no maniry hampiasa ny gymnastique noho ny fahaverezan'ny fahavoazana. Amin'ity tranga ity dia tsara ny mampiditra ao anatin'ny 10-15 minitra mihazakazaka eo anelanelanao na 7-10 minitra amin'ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny tady, ary koa ireo fampiharana izay mamaha ireo olana. Ny fomba fiasa toy izany dia hanampy anao hiady amin-kerimpo.
Talohan'ny gymnastics ho an'ny fahavoan'ny lanjany dia soso-kevitra ny hisotro kafe kafe tsy misy fanampiana - lozantatra mahavelona amin'ny tavy voajanahary. Mandritra ny fampiofanana dia afaka misotro rano ianao, saingy farafahakeliny farafahakeliny aorian'ny fotoam-pivoriana, ary alohan'izany dia tsy misy afa-tsy proteinina (alikaola mihosotra, tsaramaso mena ambany, akoholahy akoho, sns).
Io gymnastics io dia tsara indrindra atao isanandro - izany dia hampitombo ny fampiasana kalorie, izay midika izany fa hanampy anao handresy ny lanjany mihoatra ny azo atao.
Raha manapa-kevitra ny hianatra any an-trano ianao ary tsy mahafantatra hoe aiza no hanombohana dia azonao atao ny mindrana ilay programa amin'ny Internet amin'ny iray amin'ireo lahatsary maro amin'ity lohahevitra ity. Iray amin'izy ireo no manolotra anao ankoatra ity lahatsoratra ity. Aza adino ny fitsipika ankapobeny:
Ny gymnastique dia manomboka amin'ny fampakarana hafanana: loha-doha, fikatroha-doha, fampirimana ny tsangambato rehetra, pantsana, fandroana sy ny sisa.
Amin'ny gymnastics dia tsy mety ho tapaka, ny trano dia tsy misy fitsaharana.
Raha manampy olon-ketsa, lunges, pouse-ups ianao - ireo rehetra ireo dia tokony hanaraka ny ampahany lehibe indrindra.
Ny fanarahana ny horonan-tsary novolavolaina, dia tsy mampaninona anao ny mandresy ny hozatra. Na izany aza, tsy azo atao ny mijanona amin'ny dingana malaindaina toy izany: amin'ny herinandro 2-3 dia mifamatotra ny vatanao, ary mila mitombo ny enta-mavesatra.
Sakona kitapo ho an'ny gymnastique rhythmique
Degrees of retardation mentally
Sandale eo amin'ny lampihazo - ireo modely modely amin'ity fahavaratra ity
Ilaina ve ny misotro rano be?
Fanitsiana anatiny ny fandroana
Aza mino an'izany! Ity kisary ity dia lasa kintana Instagram
Noho ny fitsaboana ny tenda amin'ny zaza 1 taona?
Fanamboarana lakozia lehibe
Belyashi - fanandramana fitsapana sy karazan-tsakafo ho an'ny tsirony rehetra!
Ahoana ny fomba hanomanana cocktail ranomasina?
Ny feo Osip ao an-tsain'ny ankizy - fa tsy hajaina?
Toerana misy kiraro
Nahoana no ilaina ny basilika?
Infrared dryer ho an'ny legioma sy voankazo
Fomba ahoana no hahatonga anao ho gaga?
Tsy maintsy mitsidika ity tanàna ity ianao, ary izany no antony ...